Uluhlu lweimeyile lokuQeshisa, into ekufuneka uyazi
NgoLwesithathu, Matshi 24, 2010 NgoMgqibelo, ngoJuni 27, 2015 UScott Hardigree
Rhoqo kuthethwa kakubi ngathi kwaye kuhlala kungaqondwa kakuhle, Uluhlu lwe-imeyile luqeshisa yindlela yokuthengisa eyamkelweyo ngokubanzi enokuthi ibonelele nge-ROI enamandla, ukuba uyazi ukuba ujonge ntoni kwaye uhloniphe ibhokisi engenayo. Ukuba awuqhelekanga okanye awunamdla wokuqesha uluhlu lwe-imeyile nantsi into esezantsi kwizibonelelo kunye nezinto eziphambili ezahlulahlula kunye nokuqwalaselwa.
Ngelishwa uluhlu lwe-imeyile olusemthethweni lwamathuba okuqeshisa aye onakaliswa zizenzo zabanikezeli abangaphantsi kwe-stellar nokuba ngaba bangabalingisi beekhomputha, abathengisi beedilesi ze-imeyile, okanye amaxoki ajonge ubuso. Akukho nanye enokunceda i-ROI yomthengisi. Kutheni kufanelekile? Abamkeli be-imeyile abanabo ubudlelwane kunye nombutho onedilesi ye-imeyile, kwaye uthumele umnikelo wakho.
Kwiminyaka yam eli-12 kwintengiso ye-imeyile ndafumanisa ukuba awona mathuba mahle ahlala ekuqeshweni oyinyaniso Uluhlu lwababhalisi. Oko kukuthi, uluhlu lwe-imeyile olunophawu oluvela kupapasho, iinkonzo, okanye iimveliso ezaziwa ngumamkeli kunye namaxabiso.
Ingaba isebenza kanjani & Iingqwalaselo eziphambili
Abanini boluhlu baya kuthumela isithembiso somthengisi kubabhalisi babo.
Umthengisi uhlawula umrhumo wale nkonzo, ihlala ibiza iindleko-ngewaka (CPM).
Ngokungafaniyo neposi ethe ngqo okanye ukuthengisa ngomnxeba, umthengisi akazange alubone uluhlu.
Ngokungafaniyo nentengiso engenayo, konke malunga nokuvelisa unikezelo oluxabisekileyo, hayi umxholo.
Uluhlu lokhetho yeyona nto ibalulekileyo, elandelwa sisibonelelo kunye noyilo.
Kwabaninzi abathengisa uluhlu lwe-imeyile ziindawo ezihambelanayo zokukhulisa uluhlu lwababhalisi babo, ukupakisha imibhobho yabo kwaye, ewe, benza ukuthengisa ngokuthe ngqo. Nazi izibonelelo ezimbalwa.
Ixabiso loMbutho (kunye nomnini woluhlu)
Ixabiso eliphantsi lokuThengwa (thelekisa ezinye iindlela ezizodwa)
Iyakhawuleza (iziphumo zovavanyo kwaye zenze uhlengahlengiso ngeentsuku, hayi kwiiveki)
Ukuhanjiswa okungcono (Ukuthelekisa kuluhlu lokuthotyelwa kunye nokuthengwa)
Uluhlu lwabanini luza kwiincasa ezininzi ezinje ngabathengisi, abavelisi beminyhadala, imibutho, abapapashi bemveli, kunye neebhlog. Zonke zinokufumana ixabiso elibonakalayo kuluhlu lwe-imeyile eziqeshisayo nazo, nangona ziluhlobo olwahlukileyo.
Ingeniso ($ 1-2 ngomrhumisi ngamnye, ngonyaka ngumgaqo olungileyo wesithupha)
Ulawulo (yintoni, nini, ngubani)
Elula (akukho ntengiso, ukuthengisa, ukubiza amatyala- ukuba usebenza nge Uluhlu lweNkampani yoLawulo lweeNgcali).
Ucoceko (ukhula lukhuni rhoqo)
Ukuya ngaphaya kokukhetha uluhlu olufanelekileyo, abathengisi abalumkileyo abasathathi thenga izinto zam indlela. Endaweni yokuba udwelise amaphulo okuqesha afumana ubuchule ngakumbi, jonga eli phulo ukusuka kwi-Surfline kunye neRip Curl. Umzekelo omkhulu wendlela abapapashi abanokunika ngayo ababhalisi babo ukufikelela ngokuthe ngqo kwiimveliso ezincedisayo, iinkonzo, okanye izibonelelo, kunye nokuphumelela iintliziyo zabo kwinkqubo.
Ixesha elizayo lokuQeshiswa kwe-imeyile
Ukuhanjiswa kwe-imeyile ngumceli mngeni oqhubekayo kubathengisi boluhlu abasebenzisa uluhlu olwenziweyo okanye oluthengiweyo. Inyaniso, mngeni ilula kakhulu kwinkcazo. Yinto entle leyo. Ikhulula iibhokisi zeposi kubathengisi abafuna ukujolisa kwizibonelelo zabo kubabhalisi abasemthethweni ababonakalise umdla kwaye banokuthi babe nexesha elifanelekileyo, okanye bafumane ixabiso lokwenyani kweli thuba.
tags: uluhlu lwe imeyileUluhlu lwe-imeyile luqeshisauluhluuluhlu lokurenta
Iintlanganiso-Ukusweleka kweMveliso yaseMelika
Ngaba amanani amakhulu omlandeli abala ngokwenene?
Mar 25, 2010 ngo-10: 46 AM
Enkosi uScott ngolwazi oluxabiseke ngolo hlobo kwintengiso ye-imeyile. Ndifumene esi sihloko sinomdla kakhulu kwabo baqalayo iinkampani ezinemveliso enkulu kodwa hayi uluhlu olufanelekileyo lwabathengi abakhethe ukuba khona.
Ndicinga ukuba inokubonelela ngezibonelelo ezininzi zeshishini, enye yazo, idityaniswa neshishini lomnini woluhlu. Ke qiniseka ukuba ishishini linegama elihle phakathi kwabathengi babo kuba kungenjalo oko kuya kubulala nje uphawu lwakho endaweni yokulusebenzisa.
Joyina iincoko malunga nokuthengisa nge-imeyile kwi-Startups.com Q&A
Epreli 25, 2016 ngo-2: 56 PM
Lithini igama le-imeyile yokuRenta i-Arhente. Ndinoluhlu lwababhalisi abangaphezu kwe-1mill + kwaye ndingathanda ukurenta uluhlu lwam okanye ukuyithengisa. Ngaba umntu unokucebisa inkampani eyakwenza oko?